Esi mejuputa nweta nnweta email maka teknụzụ enyere aka | Martech Zone
Tuesday, January 29, 2019 Sọnde, Febụwarị 3, 2019 Douglas Karr
Enwere ndị nrụgide na-adịgide adịgide maka ndị na-ere ahịa ka ha gbasaa ma bulie teknụzụ kachasị ọhụrụ na ọtụtụ mgba ị na-eche Ozi m na-anụ ugboro ugboro site na ụlọ ọrụ ọ bụla m na-ajụ bụ na ha nọ n'azụ. Ana m emesi ha obi ike na, n'agbanyeghị na ha nwere ike, otú ahụ ka ọ dị onye ọ bụla. Nkà na ụzụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke na-agaghị ekwe omume ijide.
Nyere aka na teknụzụ
Nke ahụ kwuru, ọtụtụ teknụzụ nke ịntanetị wuru na ntọala nke mmadụ niile metụtara, gụnyere ndị nwere nkwarụ. Teknụzụ na-enyere aka na-aga n'ihu na-agbanwe dị ka ngwa ọrụ na teknụzụ na-eme. Ihe atụ ụfọdụ nke ntụpọ na teknụzụ na-eme ka ndị mmadụ nwee ike imeghari:
Nchọpụta - sistemụ na - akuzi ma na - enyere aka icheta ihe.
Emergency - biometric monitors na ihe mgbaàmà mberede.
Ntị - ngwaọrụ na-ege ntị, amplifiers, na ihe enyemaka yana sistemụ olu-na-ederede.
Mbugharị - ihe nkedo, ndi na-ejegharị, oche nkwagharị, na ngwaọrụ nnyefe.
visual - Ndị na-agụ ihuenyo, braille embossers, ihe ngosi braille, magnifiers, tactile keyboards, igodo enyemaka na wearable teknụzụ.
Iji mee ka sistemụ kọmputa nwee ike ịnweta, enwere sistemụ ngwanrọ na sọftụwia nke na-enyere ndị nwere nkwarụ na ndị nwere nsogbu kọmputa aka. Maka ndị nwere nsogbu anụ ahụ, nyocha anya na nnukwu ihe ntinye nwere ike inye aka. Maka enweghị ntụpọ, ndị na-agụ ihe nkiri, ederede-gaa-okwu, akụrụngwa dị iche iche dị elu, ma ọ bụ ngosi braille na-enye ume ọhụrụ. Maka ntụpọ anụ, enwere ike iji ya mechie emechi.
Email bụzi isi okwu nkwukọrịta, ọkachasị maka ndị nwere nkwarụ. Ndị ahịa nwere ike ma mepụta, chepụta ma mepụta mkpọsa email nke enwere ike ịnweta. Ihe omuma ihe omuma a site na ndi mọnk Email ga enyere gi aka ime ka ozi-e gi di nma maka onodu anya, nuru, ihe omuma, na akwara ozi.
Ndị na-ere ahịa email n’ụwa niile na-achọ ụzọ ọhụrụ iji melite njikọ aka na ịdị irè nke mkpọsa email ha. N'ime nke a, ụfọdụ amatala na teknụzụ iji mee ka ozi ịntanetị ha dịrị ndị ahụ mfe otu ijeri mmadụ n'ime ụwa bi na ụdị ụfọdụ nke nkwarụ (isi iyi: World Health Organisation).
Ndị mọnk Email: Otu esi eme ka ozi ịntanetị nweta
Ihe omuma ihe a na akowa ihe obula site na okike ihe, ime ihe, na nhazi. Nakwa, nkọwa gbasara nkọwa ụfọdụ ngwaọrụ ị nwere ike iji:
IWU - Ngwaọrụ nnweta weebụ. Ndọtị ihe nchọgharị ndị a nwere ike inyere gị aka inwale ma dozie nsogbu gị na HTML.
Onye Nlele - Ngwá ọrụ a na-enyocha otu ibe HTML maka imekọ ihe na ụkpụrụ nnweta iji hụ na mmadụ niile nwere ike ịnweta ọdịnaya ahụ. Nwere ike mado email gị HTML ozugbo na ya.
VoiceOver - VoiceOver pụrụ iche n’ihi na ọ bụghị standalone ihuenyo agụ. Ejikọtara ya nke ọma na iOS, macOS na ngwa niile arụnyere na Mac.
Onye nyocha - Narrator bụ ngwa nge ihu na ihu n’ime Windows 10.
TalkBack - TalkBack bụ ihe ngosi ihuenyo Google gụnyere na ngwaọrụ gam akporo.
Nke a bụ ozi infographic zuru oke, nnweta email: Otu esi emepụta nka zuru oke Email:
Tags: nkà na ụzụ na-enyere mmadụ akabraille akyɛakpịrị mmachiemail nwetabọtịnụ emailemail oyiriemail edemedeihe oyiyi emailemail usoronarratoradịghị ahụ ụzọteknụzụ ndị a na-adịghị mma
Ngwa ahia ahia 9 nyere gi aka imeputa ihe di nma na Blog